Ny fototry ny atidoha: manova ny taova ho an'ny tanora 25 | Valin'ny Fanamarinana
Ny vanim-potoanan'ny fahatanorana dia manomboka eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 taona manomboka ny fahamaotiana ary mitohy hatramin'ny 25 taona. Tena manampy ny mahatakatra fa ny atidohan'ny adolantsento dia tsy mitovy amin'ny fomba ara-batana sy ara-batana ary ara-drafitra amin'ny an'ny zaza na ny olon-dehibe. Ny programa momba ny fanambadiana dia mipoapoaka amin'ny fahatsiarovantsika amin'ny fahatongavan'ireo hormonina ara-pananahana amin'ny fahamaotiana. Tamin'izay fotoana izay no nitodihan'ny sain'ny zaza avy amin'ny saribakoly sy ny fiara hazakazaka ka lasa laharam-pahamehana amin'ny natiora, ny fiterahana. Noho izany dia manomboka ny fahalianan'ny tanora adolantsento momba ny firaisana ara-nofo sy ny fomba ahazoana miaina izany.
Ny lahateny TED manaraka (minitra 14) avy amin'ny Profesora Sarah Jayne Blakemore, manam-pahaizana momba ny neuroscience ny asa miafina ao amin'ny atidoha adolescent, manazava ny fivoaran'ny atidoha atidoha. Tsy miresaka momba ny firaisana ara-nofo, fampiasana sary vetaveta ary ny vokany izy. Ny vaovao tsara dia ity fampahafantarana (50). Izy dia mpampianatra momba ny tsy fandinihan-tena ao amin'ny Ivontoeram-pirenena momba ny zava-mahadomelina any Etazonia ary manazava ny fisian'ny tosika toy ny toaka na ny zava-mahadomelina sy ny dingana toy ny lalao, ny pôrnôgrafia ary ny filokana dia mety handrava ny atidoha.
Tsara izany podcast ity (56 mins) nataon'i Gary Wilson dia tsy mifanaraka amin'ny fomba amam-panaon'ny Internet amin'ny atidoha. Manazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampiasana masturbation sy ny fampiasana sary vetaveta.
Ny fahatanorana dia fe-potoana fianarana haingana. Rehefa manomboka haingana isika mitady fikarohana vaovao sy fahaiza-manao ilaintsika amin'ny olon-dehibe amin'ny fiomanana amin'ny fandaozana ny akanim-borona. Ny atidoha tsirairay dia tsy manam-paharoa, noforonina sy nofaritan'ny fianarany manokana.
Ity làlan-drivotra ity dia mitranga satria ny atidoha dia mampifandray ny rafitra amin'ny valim-pifandraisana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo faritra mitoka-monina izay mampiakatra ny fahatsiarovantsika sy ny fihetseham-po bebe kokoa amin'ny cortex aloha, ny faritra tompon'andraikitra amin'ny fifehezan-tena, ny fisainana ara-tsaina, ny fisainana ary ny fandrindrana maharitra. Mampiadana ny fifandraisana eo amin'ireo faritra samihafa amin'ny alàlan'ny fandefasana ny làlam-pamokarana be mpampiasa indrindra amin'ny zava-maniry fotsy antsoina hoe myelin.
Taorian'ny fotoam-pirahalahiana sy ny fanavaozana, ny atidohatry ny adolescent dia mamela ireo neurons tsy ampiasaina ary ny fifandraisana mety hizorana ny làlam-piarahamonina matanjaka amin'ny alahelo miverimberina sy ny fahazarana. Noho izany raha mandany ny ankamaroan'ny fotoanan'izy ireo amin'ny aterineto ny zanakao, na mifangaro amin'ny tanora hafa, mianatra, mianatra mozika na milalao fanatanjahan-tena, dia ho toy ny lalambe haingam-pandeha amin'ny ankapobeny ny fomba fampiasana matetika.
Amin'ny fahazazana vao haingana, ny faniriana fientanam-po dia eo amin'ny tampony. Ny atidoha dia mamokatra dopamine bebe kokoa ary mahatsapa kokoa azy io, manery azy ireo hitsapa valisoa sy risika vaovao. Ny fanampiana bebe kokoa dopamine dia manampy amin'ny fanamafisana sy fanamafisana ireo lalana vaovao ireo.
Ohatra, izy ireo dia manana fandeferana bebe kokoa noho ny fisavorovoroan-toaka, manafintohina, mihetsika, horonan-tsary mampihorohoro izay mety ho olon-dehibe mihazakazaka. Tsy afaka mahazo azy ireo izy. Ny fandraisana fepetra dia ampahany voajanahary eo amin'ny fivelarany, toy ny fetran'ny fisedrana, manampahaizana manohitra, manamafy ny maha izy azy. Izany no atao hoe adolescence. Fantatr'izy ireo fa mety hampidi-doza ny fisotroana, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fanaovana firaisana ara-nofo sy fiadiana tsy voaaro, saingy ny valisoa amin'ny 'hatsiaka' ankehitriny dia matanjaka kokoa noho ny ahiahy momba ireo vokatra taty aoriana.
Ny fanamby atrehina ho an'ny tsirairay amin'ireo zatovo amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny atidoha dia mora miadana amin'ny aretina ara-tsaina, anisan'izany ny fiankinan-doha, indrindra fa ny fiankinan-doha amin'ny Internet. Ny fananana fiankinan-doha iray dia afaka mitarika ny fikarohana zavatra hafa sy zavatra hafa izay mitazona ny dopamine maniry. Ny fiankinan-doha amin'ny fakana am-bavany dia tena mahazatra, zava-mahadomelina, zava-mahadomelina, kafeinina, pôrnôgrafia amin'ny aterineto, kilalao ary filokana, ohatra manery ny rafi-pitantanana ary mamokatra vokatra maharitra ho an'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
Miaina ho an'ny ankehitriny - Delay Discounting
Fa nahoana izany? Satria ny lobus frontal izay miasa ho 'freins' amin'ny fitondran-tena mampidi-doza dia mbola tsy nitombo ary mbola lavitra ny ho avy. Izy io dia fantatra amin'ny fihenan'ny fihenam-bidy - aleonao ny fahafaham-po avy hatrany noho ny valisoa amin'ny ho avy, na dia tsara kokoa aza ny any aoriana. Ny fikarohana manan-danja tato ho ato dia nampiseho fa ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia mamokatra taha ambony fanesorana fihenam-bidy. Izany dia tokony hiahy ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra. Ity dia manampy lahatsoratra momba ny foto-kevitra momba ny fikarohana vaovao. Ny lahatsoratra feno dia misy Eto. Raha fintinina, ireo mpampiasa pôrnôgrafia izay namela ny fampiasana sary vetaveta na dia herinandro 3 aza dia nahita fa afaka nanemotra kokoa ny fahafaham-po noho ireo lohahevitra tsy nanao izany. Ny fahaizana mampihemotra ny fahafaham-po dia fahaiza-miaina iray manan-danja malemy amin'ny fampiasana sary vetaveta ary mety mitaky ny valin'ny fanadinana mahantra kokoa, ny famokarana ambany ary ny fahalasanan'ny mpampiasa pôrnôgrafia maro. Ny vaovao tsara dia toa mihodinkodina izany rehefa mandeha ny fotoana rehefa miala amin'ny pôrnôgrafia ny mpampiasa. Jereo eto raha ohatra ny amin'ny tatitra momba ny tena tantaram-pitiavana.
Rehefa lasa olon-dehibe isika, na dia mbola mianatra foana aza ny atidoha, dia tsy manao toy izany amin'ny haingana toy izany. Izany no mahatonga ny safidy hianatra amin'ny zandrinay dia zava-dehibe tokoa ho an'ny fanatsarana ny hoavintsika. Ny varavarankelin'ny fahafahana hianatra lalindalina dia vao mainka manomboka io fotoana miavaka io.
Ny atidoha mahasalama dia atidoha
Ny atidoha salama dia atidoha ho an'ny atidoha, iray izay afaka mandinika ny vokany ary mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fikasana. Afaka mametraka tanjona izany ary manatratra izany. Manana fihenam-bava izy. Afaka manazava ny fahazarana tsy manompo intsony izy. Izy io dia mamorona ary mahavita mianatra fahaiza-manao sy fahazarana vaovao. Raha miezaka ny hampivelatra ny atidoha matanjaka isika, mampitombo sy manatsara ny fomba fijerintsika, miroborobo isika, mahita ny zava-mitranga manodidina antsika ary mahatsapa ny filan'ny hafa. Miroborobo, mankafy ny fiainana isika ary manatratra ny tanjontsika marina.
<< Rafitra valisoa